भन्दै रोक्नुहोस् ध्यान स्प्यानहरू घट्दैछन्, तिनीहरू होइनन्! | Martech Zone
हामी स्न्याकेबल सामग्री अर्को व्यक्तिको जत्तिकै मन पराउँछौं, तर म विश्वास गर्दछु कि हाम्रो उद्योगमा एक ठूलो गलत धारणा छ। त्यो धारणा ध्यान स्प्यानहरू कम हुँदैछन् यसको वरिपरि केही प्रस needs्ग राख्नु पर्छ। पहिलो, म पूर्ण रूपमा असहमत छु कि व्यक्तिहरू उनीहरूको अर्को खरीद निर्णयको वरिपरि शिक्षाको लागि कम ऊर्जा खर्च गरिरहेका छन्।
उपभोक्ताहरू र व्यवसायहरू जसले अनुसन्धान गर्नु अघि धेरै समय बिताउँदछन् अझै अनुसन्धान गरिरहेका छन्। म भागे विश्लेषण रिपोर्ट हाम्रो ग्राहकहरु को सबै तिर यस पोष्टको लागि तयारीमा र प्रत्येकको पृष्ठमा १ र २ वर्ष पहिलेको तुलनामा बढी समय खर्च गरिएको छ र अधिक समय प्रति सत्र खर्च गरिएको छ। हामी सामग्रीमा गहिरो अनुसन्धान गरिरहेका छौं र लगत्तै हामी कती गहिराउँदछौं त्यसमा धेरै राम्रो प्रतिफल देखिरहेका छौं।
के परिवर्तन भएको छ ध्यान केन्द्रित अवधि होइन, यो सामग्री खोज्नमा समावेश भएको प्रयास हो। खोजीकर्ताहरू अब उनीहरू के खोजिरहेका छन् भनेर छिटो पहिचान गर्नमा माहिर हुँदैछन्। यदि तिनीहरूले यो देख्दैनन् भने, तिनीहरू जान्छन्। तर यदि उनीहरूले यो फेला पारे भने, तिनीहरू पक्कै पढ्न, अनुसन्धान गर्न र साझेदारी गर्नमा यती धेरै समय खर्च गर्दछन्।
यदि तपाइँको कम्पनी पृष्ठ वा साइट मा समय मा खर्च गरेको एक महत्वपूर्ण ड्रप देखिरहेको छ भने, यो धेरै कारणका लागि हुन सक्छ:
तपाईंको शीर्षक तपाईंको सामग्रीसँग मेल खाँदैन। हुनसक्छ तपाईंले लि link्कबाइट विधिहरू प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ मानिसहरूलाई लोभ्याउन र त्यसपछि सामग्री धनी छैन - जसले कसैलाई छोड्नेछ!
तपाईं गलत सामग्री को लागी अनुकूलन गर्दै हुनुहुन्छ। एक साईट कीवर्ड संयोजनको लागि तपाईंको साइट फेला पार्नु जुन तपाईंसँग अधिकार छैन तपाईंको बाउन्स दर बढाउन र तपाईंको साइटमा बिताएको समय कम गर्न सक्दछ। लक्ष्यमा लेख्नुहोस् - हरेक पटक!
तपाईं खराब अप्टिमाइज भुक्तान गरिएको खोज अभियानहरू मार्फत प्रचार गर्दै हुनुहुन्छ। तपाइँको साइट मा हरेक नयाँ आगंतुक शायद मान्छे को लागी कम समय खर्च गर्न गइरहेको छ कि फर्कन्छ। अभियानहरू परिवर्तन गर्दा साइटमा समय सापेक्षिक कम हुन सक्छ किनकि नयाँ आगन्तुकहरूले उनीहरूलाई चाहिने के फेला पार्छन् (वा फेला पार्दैन)।
तपाईं सामग्री रणनीतिहरूमा लगानी गर्नुहुन्न जुन गहिरो सment्लग्नतालाई ड्राइभ गर्दछ - जस्तै इन्फोग्राफिक्स, प्रस्तुतीकरणहरू, ईबुकहरू, ह्वाइटपेपरहरू, केस स्टडीहरू, प्रशंसापत्र, स्पष्टीकरणकर्ता भिडियोहरू, अन्तर्क्रियात्मक उपकरणहरू, इत्यादि।
स्न्याकेबल सामग्री डिप्लोय गर्ने रणनीति होइन किनभने ध्यान स्प्यानहरू घट्दैछन् (तिनीहरू होइनन्!)। स्न्याकेबल सामग्री ब्रेडक्रम्ब्स हुन् जसले मानिसहरूलाई तपाईंको साइटमा प्रासंगिक शीर्षकहरूमा डो lead्याउँछ ताकि उनीहरूले खोज्दै गरेको जानकारीमा गहिरो संलग्नता फेला पार्न सक्नेछन्।
म तपाईंलाई पृष्ठ वा साइटमा रूपान्तरण र समयको विश्लेषण चलाउन चुनौती दिन्छु र तपाईंले भेट्टाउनुहुने सामग्री अझै लामो-सामग्री सामग्री हो। प्राथमिक अनुसन्धान, सेता कागजातहरू, केस स्टडीहरू र विस्तृत, जानकारी-धनी ब्लग पोष्टहरूले निरन्तर सगाईको लागि ड्राइव गर्न र रूपान्तरणको लागि नेतृत्व गर्दछ।
तपाईंको विकास गर्दै सामग्री विपणन रणनीति सment्लग्नताको विभिन्न स्तरहरूको लागि निर्माण सामग्री समावेश गर्नुपर्दछ जसले गर्दा उपभोक्ता वा व्यवसाय अधिक चासो हुने बित्तिकै उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने अनुसन्धानको गहिरो डुबुल्की मार्न सक्छन्।
स्न्याकेबल सामग्रीको यसको ठाउँ छ, तर यो छोटो ध्यान स्पानहरूको लागि होईन। यो न्यूनतम प्रयास र व्यापक दर्शकहरूको लागि गहिरोमा आगन्तुकहरूलाई तान्नको लागि हो! यो पानीको चुम्मि while्ग गर्दैछ जब वास्तविक प्रलोभन तपाईंको लक्ष्यको लागि अगाडि छ।
दिमागमा यो साथ, Oracle बाट यस इन्फोग्राफिक snackable सामग्री रणनीतिहरु मा केही राम्रो अन्तरदृष्टि छ।
टैग: इंफोग्राफ़कबजेटस्न्याकेबल सामग्रीसमयपृष्ठमा समयसाइटमा समयसमय सत्रमा खर्च भयोसमय पृष्ठमा व्यतीत भयोसमय साइटमा खर्च भयो
आधुनिक मोबाइल यात्रीको उदय
सेल्सफोर्स मार्केटिंग क्लाउडबाट २०१ Marketing मार्केटिंग तथ्या .्क